आज २०७७ असोज ४ गते आइतबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
देश–विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । छर–छिमेकमा असमझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अलमलिनुपर्ला। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने देखिन्छ । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । आर्थिक पक्ष सबल छ । आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। आफन्तबाट टाढिनुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। लाभप्रद कामले लोभ्याए पनि फजुल खर्च हुन सक्छ। अवसरका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला।
व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। पारिवारिक वातावरण तपाईंको अनुकूल नभए पनि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने धन आर्जन हुनेछ। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ।
मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धाले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ। जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ । पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिले दुश्मनी गर्नेहरूले पनि मित्रताका हात अघि बढाउनेछन्। काम पूरा नभए पनि आंशिक लाभको सम्भावना। आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ । न्यायिक, कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ ।
आयआर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्। तर श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफलका लागि समय पर्खनुपर्नेछ। आँटेको कामको लगानी पनि अरूका लागि खर्च हुन सक्छ। हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन् । नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । सरसापटमा धन बाहिरिने देखिन्छ । आम्दानी रोकिनाले कर्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउन सक्छन्।
देउखुरी राजधानी हुने टुंगो भएपछि दंगाली दंग (भिडिओ हेर्नुस)
Posted on October 2, 2020 Author Rapti Khabar
असोज १६, दाङ, प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेसँगै दाङका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। उनीहरूले भौगोलिक हिसाबले पनि प्रदेशको राजधानी दाङ नै उपयुक्त रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पेश गरेका […]
प्रदेश ५: कोरियाबाट फर्किएका मनकाजीले देखाए चमत्कार ! [भिडियोसहित]
Posted on September 1, 2020 Author Rapti Khabar
भगवती पाण्डे/सेतोपाटी बुटवल, भदौ १६ दुई वर्षपहिले दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका बुटवलका मनकाजी थापा अहिले कालिज फर्ममा भेटिन्छन्। कोरियामा ५ वर्ष काम गरी फर्किएका थापालाई त्यसपछि भने पैसा कमाउन विदेशी भूमिमा जान मन लागेन। गुल्मीको शान्तिपुर चन्द्रकोटबाट १७ वर्ष पहिले बुटवल उपमहानगरपालिका-१९ रानीबारीमा बसाइँ सरेका मनकाजीले दाजुसँग मिलेर आफ्नै जग्गामा कालिज फर्म सञ्चालन गरेका हुन्। उनीहरूका […]